खै डेटिङ स्पट ?
हिमाल दाहाल शुक्रवार, माघ २६, २०७४ 715 पटक पढिएको
ध्रुवकुमार परियार र कृति परियार (मोडलिङमा आधारित)।
‘चुनाव जितेपछि के गर्ने ? इटहरीमा आकाशेपुल बनाउने र डेटिङ स्पट बनाउने,’ प्रदेश चुनावमा सुनसरी क्षेत्र नं. २ क बाट चुनाव लड्दै गर्दा इटहरीका पूर्वमेयरसमेत रहेका सर्वध्वज साँवाले ठ्याक्कै यही भनेका थिए।
उनले इटहरीमा ‘डेटिङ स्पट’को लागि आकाशेपुल बनाउने भनिरहँदा त्यसले युवामा राम्रै तरंग ल्यायो। कतिपयले आफूहरूको भावना बुझ्ने अभिव्यक्ति भने त कतिपयले वाहियात भन्दै आलोचनासमेत गरे। अहिलेका प्रदेश सांसद र इटहरीका पूर्वमेयर साँवाले यसअघि पनि युवायुवतीको लागि डेटिङ पार्क हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। अधबैंसे उमेर पार गरिसकेका एक नेतालाई युवाका लागि प्रेमपार्क हुनुपर्ने आवश्यकता किन बोध भयो ? वास्तवमा प्रेमपार्क अत्यावश्यक नै भइसकेको छ।
काठमाडौंका पार्कहरूमा युवायुवती हात समाएर र अँगालो मारेर बसिरहेका देखिन्छन्। वरपर जति मान्छे हुन्, त्यसले उनीहरूलाई कुनै फरक पार्दैन। प्रेम अभिव्यक्त गर्न उनीहरू संसार भुलेर बस्छन्। त्यतिले नपुग्नेहरू जोडीसँगै गेस्ट हाउस जान्छन्। तर, प्रहरीको छापा उनीहरूका प्रेममा बाधक हुन्छ। राजधानीबाहिर पूर्वका सहरको युवा प्रवृत्ति पनि त्यही हो। तर, राजधानीबाहिर पार्क भने खासै छैनन्। भए पनि प्रेमिल जोडी बस्ने पार्क त छँदै छैनन्।
फेब्रुअरी १४ दौडेर वर्षैपिच्छे आउँछ, त्योसँगै नेपाली युवायुवती आपसमा प्रेम साटासाट गर्छन्। खासगरी कलेजका युवायुवती। तर, प्रेम स्पटको अभाव छ। प्रेम जोडीहरू पुराना सरकारी कार्यालयतिर त कोही स्कुल, कलेजका कुना अनि कोही झाडी र कुनाकानीमै प्रेम पोख्न तत्पर देखिन्छन्।
प्रेमका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार देखिने युवाहरूले सिमसार, पिकनिक स्पटलाई नै डेटिङ र प्रेम अभिव्यक्तिको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर, त्यो पनि उति सुरक्षित छैन। भ्यालेन्टाइन डे नजिकिँदै गर्दा त्यो अभाव झन् खट्केको छ युवामाझ।
‘वरिपरि मान्छे धेरै हुन्छन्, केटाकेटीदेखि बूढाहरू पनि हुन्छन्, कसरी बस्नु ? ’ इटहरीका प्रदीप पीडा पोख्छन्, ‘कम्तीमा हात समाएर अँगालो मार्नेसम्मको ठाउँ पनि छैन।’
युवाहरूले यस्ता कुरा भनिरहँदा अरूलाई सुन्न अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। तर, भोग्ने युवाका लागि यी कम्ता पीडादायक अवस्था होइन। ‘फिजिकल रिलेसन अनिवार्य भएको छ, मात्रा फरक होला, तर केही न केही त चाहिन्छ,’ प्रेम पार्कहरू नहुँदा युवाहरू गेस्ट हाउस धाउन बाध्य भएको बताउँदै सुगम भन्छन्, ‘तर सामान्य प्रेम गर्न पनि ठाउँ छैन।’
यस पटकको भ्यालेन्टाइन डेमा धनकुटा घुम्न जाने योजनामा छन्– सुगम। नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदा त्यसले सम्बन्धमा नयाँपन दिने र सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उनको विश्वास छ। ‘खानपान त छँदै नै छ,’ उनी भन्छन्।
भावनात्मकभन्दा पनि फेसन र शारीरिक आवश्यकताको रूपमा प्रेमलाई लिन थालिएको छ। यसले भ्यालेन्टाइन–डेलाई विकृत–डे बनाउँदैछ।
हिजोआज प्लस टुहरूमा ‘लभ ट्रेन्ड’ फस्टाएको छ। अनि यी उमेरसमूह सबै साथीसंगीमाझ आफूलाई सबल देखाउनकै लागि भए पनि गर्लफ्रेन्ड वा ब्वाईफ्रेन्ड बनाउने प्रचलन बढ्दो छ। ‘अफेयर’, ‘डेटिङ’, ‘ब्रेकअप’, ‘प्रपोज’ अत्यधिक प्रयोग हुने शब्द हुन प्लस टु किशोरकिशोरीका। फेसन र युवा मनोविज्ञानले प्रेमलाई विकृत तरिकाले परिभाषित पनि गर्न थालेको छ। भावनात्मकभन्दा पनि फेसन र शारीरिक आवश्यकताको रूपमा प्रेमलाई लिन थालिएको छ। यसले भ्यालेन्टाइन– डेलाई विकृत–डे बनाउँदैछ।
यो दिन प्रेम अभिव्यक्तिको लागि कतिपयले एकान्तस्थल रोज्छन्। इटहरी र धरानका युवाको पहिलो रोजाइमा धनकुटाको भेडेटार पर्छ। भेडेटारका होटेलले आगन्तुकका लागि स्तरीय सेवा दिन्छन्। पूर्वी तराईका युवायुवती फरक मौसममा रमाउनकै लागि भेडेटार पुग्छन्।
त्यस्तै भेडेटार नजिकैको राजारानी, ओख्रे, नाम्जेमा पनि युवायुवती पुग्ने गरेका छन्। धरानका धार्मिकस्थलमा पनि युवायुवतीको जमघट देखिने गरेको छ भने तराईका विभिन्न सिमसारहरू जस्तै इटहरीको तालतलैया, सुन्दरहरैंचाको हसिना, बेतना, झापाको जामुन खाडीजस्ता ठाउँ पनि इटहरी र धरान वरिपरिका अघोषित डेटिङ स्पटहरू हुन्।
त्यसबाहेक विभिन्न रेस्टुरेन्ट पनि युवायुवतीको अघोषित डेटिङ स्पट हो। नाइट क्लबमा युवायुवती जोडी बनाएर पुग्छन् र रम्छन्।
तर युवायुवतीका लागि सुरक्षित डेटिङ पार्कको भने अझै अभाव छ। ‘भेटघाट गर्ने ठाउँ नै हुँदैन, फेरि सार्वजनिक ठाउँमा बसेको देख्नेबित्तिकै अनेक सोचिहाल्छन्,’ धरानकी प्रतिमाले अनुभव भनिन्, ‘एक दिन दाइसँग परिवारलाई नै भेट्न पार्कतिर जाँदै थिएँ, केटाहरूले जिस्काए, आफैंलाई लाज लाग्यो।’
पछिल्लो समयमा जोडी नै देखे पनि जिस्क्याउने ट्रेन्ड घटेको छ। पहिलेजस्तो अस्वाभाविक पनि ठान्दैनन्। तर, पनि व्यक्ति विशेषले कुनै समय घटनालाई नकारात्मक रूपमा लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘आजकल सबै व्यस्त भएर पनि होला, कसले के गरिरहेको छ, खासै वास्ता हुँदैन,’ प्रतिमा भन्छिन्, ‘तर कहीँ कतै भने अलि उत्ताउलै मान्छे हुन्छन्।’
युवायुवतीको जोडी मात्र होइन, ग्रुप पनि भ्यालेन्टाइन डेको पर्खाइमा छ। चार–पाँचजनाको समूह बनाएर घुम्न जाने, खानपिन गर्ने र मेला महोत्सव धाउने योजनामा समेत युवायुवती छन्।
धरानका सुरज, सुस्मिता साथीहरूसँग घुम्न जाने प्लान बनाउँदै थिए। ‘हामी कतै जाने र खानेपिउने गर्ने योजनामा छौं,’ अनि कलेज...? सुस्मिता भन्छिन्, ‘भ्यालेन्टाइन डे मा पनि कोही क्याम्पस जान्छ ? ’
कसैको लागि भने प्रेम दिवस आफ्नो स्पेसल वनलाई मात्र माया गर्ने दिन होइन। बुवा–आमाले छोराछोरीलाई गर्ने प्रेम अनि छोराछोरीले बुवाआमालाई गर्ने आदरभावको प्रेम पनि भ्यालेन्टाइन डेमार्फत अभिव्यक्त हुन थालेका छन्। बेलबारीकी मिनु श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आमाबुवालाई गर्ने प्रेम पनि प्रेम हो, त्यसैले भ्यालेन्टाइन डेमा जोडी घुम्न जानुपर्छ भन्ने पनि होइन।’
शुक्रवार, माघ २६, २०७४ मेरी गौरी
तीनकुने पुलमा बम आतंक (फोटोफिचर) 2679
स्टेसनरीमा आगलागी,साढे ४२ लाखको क्षति 67
पाँचथरमा एक हजार च्याब्रुङ प्रदर्शन (फोटोफिचर) 68
खेल उद्घाटन गर्ने क्रममा लडेर मेयरको हात भाँचियो 534
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने रञ्जु दर्शनासहित एक दर्जन पक्राउ 487
प्रदेश-२ का मुख्य न्यायधीवक्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 909